Team Viewer သုံးနည်းလေးရှိရင် ရှင်းပေးပါ - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Team Viewer သုံးနည်းလေးရှိရင် ရှင်းပေးပါ
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 26 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း မရောက်တာ ကြာပါပြီ။ မအားလို့ပါ။ အခု ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ပြောတယ် http://www.sendspace.com/file/bx31hg
အဲဒါနဲ့ သွားယူလိုက်တယ် ။ ဘာမှန်းတော့မသိဘူး။ သူငယ်ချင်းကို မေးမလို့ဘဲ ဘယ်ရောက် သွားမှန်းမသိဘူး။ အဲဒါနဲ့ သူ့ဆိုက်ကို သွားလိုက်တယ်။ ဒီမှာပါ http://www.teamviewer.com
သူပြောတာတော့ ချက်လို့လည်းရတယ်။ ဖိုင်ရှဲ ပေးလို့လည်းရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုသုံးတယ်ဆိုတာ မပါဘူးဗျ
သိတဲ့သူတွေ ရှင်းပြပေးပါ နော်.. နော်။။။။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ tweety221 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ထွန်းဝင်းနိုင်, centurymg, pannuko
Find More Posts by tweety221
ပြန်စာ - Team Viewer သုံးနည်းလေးရှိရင် ရှင်းပေးပါ
ွှTeam Viewer Wait For Session မှာ ပါတဲ့ ID နဲ့ password ကို ကိုယ်ဆက်သွယ်လိုတဲ့သူဆီပေးလိုက်ပါ။ သူ့ဆီမှာ Team Viewer ရဲ့
ညာဘက်ပိုင်း create session တွင် ကိုထည့်ခိုင်းပြီး connect to partner ကို နှိပ်ခိုင်းပါ။ဒါက သူ့ဆီမှ control တာပါ။ကိုယ့်ဆီမှ control
လိုပါက သူ့ ID နဲ့ password ကို တောင်း ပြီး connect ပေါ့။portable version မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ password ကို
menu->extra->option -> security မှာ set ထားလို့ရပါတယ်။
Last edited by yeakharr; 10-02-2008 at 03:55 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ yeakharr အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ထွန်းဝင်းနိုင်, crush, lu soe, minthumon, phoetharlay, thureinsoe
Originally Posted by tweety221
ီဒက်စ်စတော့ ရှယ်ယာရင်းလုပ်လို့ ရပါတယ်
ပြီးတော့ တစ်ခြားသူရဲ့ ကွန်ထဲကို ၀င်ပြီး လိုအပ်တာပြင်ဆင်ပေးလို့ရပါတယ်
အဲ သီချင်းတွေ ရုပ်ရှင်ဖိုင်တွေ ဖွင့်ကြည့်ရင်တော့ ရုပ်တော့ မပေါ်ဘူးပေါ့
Last edited by ကောင်စုတ်လေး; 10-02-2008 at 07:49 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ ကောင်စုတ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ထွန်းဝင်းနိုင်, centurymg, lu soe, minthumon, pannuko, phoetharlay, thureinsoe
13-02-2008, 01:16 PM
ဒါ ကိုသုံးခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်စက်ကို hack လုပ်ခံရနိုင်မလား။ ပြီးတော့ စကားဝှက်ကို သိတာနဲ့ ဘယ်နေရာက နေမဆို ၀င်လို့ရမလား
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ tweety221 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြန်စာ - သုံးနည်းလေးရှိရင် ရှင်းပေးပါ
Team Viewer server မှ တော့ ခင်ဗျား စက်ကို ၀င်လို့ ရတယ်လို့ ထင်တာပဲ. password သိရုံနဲ့တော့ မလွယ်ပါ ဘူး။ ID and password သိပြီး connection လုပ်တဲ့အခါ accept ပေးအုံးမှကို..own risk ယူပြီး လုပ်ရမှာပဲ ဗျာ..
Internet ကိုအသုံးပြုတဲ့ ကျွန်တော်လို့လို User တွေအတွက် အလွန်အသုံးတည့်တဲ့ Softwareလေးပါ... Run ရတာလွယ်ကူသလို အသုံးတွင်ကျယ်ပါတယ်... တခါသုံးပြီးလို့ Application ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Password က AutoChangeသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...ဒါလေးကိုအသုံးပြုပြီးမိမိပါတနာရဲ့ Computer ကို Remote လုပ်နိုင်သလို Fileတွေကိုလဲ အလွယ်တကူShareလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...FileTransferRate ကလဲ မြန်ဆန်လို့ အားလုံးသဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်.ပိုကောင်းတာတခုရှိသေးတယ်ဗျ...Connect လုပ်ထားပြီးဖြစ်သော်လဲ မိမိပါတနာကFile Transfer လုပ်ဖို့ မိမိရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရဖို့ လိုသေးတယ်ခင်ဗျ...File တခု Transfer လုပ်တိုင်းမေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျ...မိမိကသဘောတူတယ် ခွင့်ပြုတယ်ဆိုမှသာ Transfer လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်...နောက်တခုက မိမိ သူငယ်ချင်း၊မိတ်ဆွေ ရဲ့ Computer မှာ Error တခုခုတက်နေပြီဆိုပါတော့ဗျာ...သူကလဲမလုပ်တတ်တော့ဘူး၊မိမိကိုယ်တိုင်ကလဲ မမြင်ရတော့ ဘယ်လိုရှင်းပေးရမှန်းမသိဘူး...ဒါဆိုရင်တော့ ဒီ Application ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်......အသုံးပြုပုံကိုလဲ လွယ်ကူပါတယ်........ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Partner Details ရဲ့အောက်က ID နေရာမှာ မိမိ Partner ရဲ့ID ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...Connect to Partner မလုပ်ခင် မိမိလုပ်ချင်တဲ့ Mode ကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။Mode ရွေးပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ Connect to Partner ကို Click လုပ်ပါ.......Partner ID မှန်တယ် ဆိုရင်တော့ Password တောင်းပါ လိမ့်မယ်.....password လဲမှန်တယ် ဆိုရင်တော့ Partner ရဲ့ Computer ထဲကို မိမိရွေးချယ်ထားတဲ့ Mode အတိုင်းဝင်ရောက် သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.........။
တခုတော့ သတိပေးရအုံးမယ်ဗျ...မိမိနဲ့ Connect လုပ်မယ့် ပါတနာက မိမိချစ်သူ၊ကောင်မလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သူစိတ်မဆိုးရလေအောင် Hidden လုပ်သင့်တာလေးတွေ Hiddenလုပ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်..တော်ကြာမပြောဘူးဖြစ်နေမှာစိုးလို့...
ကိုသဝေထိုး, ထွန်းဝင်းနိုင်, centurymg, naykhantzaw, Phoekwarlay, phoetharlay, thura.it, thureinsoe
ဒါတွေက အရေးကြီးပ ဟီးဟီး
နောက်မှ ဘာဘာညာညာ အသံမကြားချင်ဘူး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကောင်စုတ်လေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
crush, phoetharlay, thureinsoe
ူlan တူတူပဲဆိုရင်တော့ အဲဒီဆော့ဝ် ၀ဲလေးမလိုပဲနဲ့ ရတယ်ခင်ဗျ ကျနော်သိတာလေး ပြောကြည့်မယ်နော် လုပ်ကြည့်ပေါ့
start - all programs - အဲဒီကနေ Accessories - Communications - Remote Desktop Connection ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်
အဲဒါလေးကို ကလစ်လိုက်တာနဲ့ မိမိသွားချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာရဲ့  စက်နံပါတ်နဲ့ စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးကြည့်လို့ရပါပြီ..
မှတ်ချက်။ ။lan တူမှရပါတယ် တစ်ဖက်က မိမိသွားကြည့်ချင်တဲ့ ကွန်ပျူတာသုံးနေရင်လဲ မရပါဘူး ။ စမ်းကြည့်ပါခင်ဗျ
သိတော့သိကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ကျနော်လဲ သိတာလေးဆွေးနွေးတာပါ မှားရင်လဲပြင်ပေးပါကြလို့...
ဖယောင်း, centurymg, crush, phoetharlay, thureinsoe
Team Viewer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေ တစ်လုံးဝင်မယ်..
နည်းပညာတွေကလည်း အရမ်းတိုးတက်နေတော့.. ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေ တစ်ခြားကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို ၀င်ဖို့အတွက် တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေစွာနဲ့လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆိုရင် အိမ်မှာနေ ရင်း သူငယ်ချင်းတွေရဲ့စက်ထဲလိုအပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေကို ဒီTeamviewer အကူအညီနဲ့ဘဲ အချိန်မကုန် လူမပင်ပန်းဘဲ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတွက် လက်ဆင့်ကမ်းမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာမှာမဆို ကော်နယ်ရှင်ကောင်းရင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်နိုင်ပါတယ်..။ ကယ်.. အောက်က ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး အင်စတော လုပ်ကြရအောင်။
အဆင့် (၂) နှင့် (၃)
အဆင့်(၄) နှင့် (၅)
အဆင့် (၆)၊ (၇) နှင့် (၈)
အဆင့် (၇) တွင် Password ကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပေးနိုင်ပါသည်။
အဆင့် (၉) နှင့် (၁၀)
အဆင့် (၉) တွင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သိမ်းမယ့်နေရာရွေးပေးပါ။
အဆင့်(၁၁) နှင့် (၁၂)
အဆင့် (၁၁) သည် Shortcuts ထည့်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆင့် (၁၂) သည် Install လုပ်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။
Team Viewer ကို အောင်မြင်စွာ Install လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Install လုပ်ပြီးရင် Desktop ပေါ်မှာ ဒီပုံလေးပေါ်နေရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ တချို့ Install လုပ်တာမှားရင် Desktop ပေါ်မှာ အဲ့ဒီပုံလေးမပေါ်ပါဘူး။ ကယ်..ဆက်ပြီး ကြည့်ရအောင်..။ Finish နှိပ်လိုက်ရင် အောက်ကပုံလေးပေါ်လာပါမယ်။
1= ကိုယ့်ရဲ့ ID (တခြားသူက ကိုယ့်ရဲ့စက်ထဲဝင်မယ်ဆိုရင် ဒီ ID နံပါတ်လေးကိုပေးပြီး ကိုယ်အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ Password (eg. aaaaa) ကို တပါးထည်း ပေးရပါမယ်။)
2= ကိုယ်က တစ်ခြားသူရဲ့စက်ကိုဝင်မယ်ဆိုရင် တခြားသူရဲ့ ID နံပါတ် ထည့်ရမယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။ (တပါးတည်း တစ်ခြားသူရဲ့ Password ကိုတောင်းရပါ့မယ်)
3= Remote Support ကိုရွေးပေးရပါ့မယ်။ ဒါမှ ကိုယ်ကတစ်ခြားသူရဲ့စက်ကို ၀င်ပြီး Support လုပ်နိုင်မှာပါ။
4= ID တွေထည့်ပြီးရင် Connect to Partner ကို နှိပ်လိုက်ရင် Password တောင်းတဲ့ Box ပေါ်လာရင် ခုနတုံး ကတောင်းထားတဲ့ Password ကို ရိုက်ပေးလိုက်ရင် ကိုယ်ကတစ်ခြားသူရဲ့စက်ထဲကို တစ်ခြားသူရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ၀င်ရောက်နိုင်ပါပြီ။ ၀င်ရောက်ပြီးသွားရင် တစ်ခြားသူရဲ့ Admin အတိုင်းဘဲ အားလုံးကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဒီရဲ့ Teamviewer က တစ်ခြားသော ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကနေ တစ်လုံးဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲလ်တွေထဲမှာတော့ တော်တော်လေးကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွား အသုံးပြုနိုင်တဲ့အပြင် Free ပေးထားတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးမို့ သဘောကျဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲလ်တွေပြင်သမားအတွက်တော့ အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းစရာမလို အိမ်ကနေ ဟိုဟိုဒီဒီ ဆော့ဝဲလ်လေးထည့်လိုက်ရုံဘဲ။ Install လုပ်ရတာ လွယ်ပေမယ့် အခုမှ စသုံးမယ့်သူတွေ အတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ပုံလေးတွေနဲ့တကွ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
သူ့ကို ဒေါင်းမယ်ဆိုရင် Teamviewer မှာသွားယူနိုင်ပါတယ်။
Last edited by ကြယ်စင်မင်း; 07-08-2008 at 07:56 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ ကြယ်စင်မင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဂတုံးလေး, ဇာနည်စိုး, ထွန်းဝင်းနိုင်, မင်းခကို, မောင်ထက်, centurymg, crush, maJunior, phoetharlay, thura.it, tinkokooo
ပြန်စာ - Team Viewer ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေ တစ်လုံးဝ
ပို့စ် 11 ခုအတွက် 14 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
တစ်ခုလောက်ဖြေပေးပါအုံး ကိုယ်နဲ့ ဆက်သွယ်မယ့်စက်မှာပါ ဒီ Software ရှိရမှာပေါ့နော် ကျေးဇူးအများတင်ပါတယ်
:27: မိသားစုဝင်များ အားလုံးကျန်းမာကြပါစေ :27:
[email] theinthuya@gmail.com [/email] အင်ဗိုက်လုပ်ပါ :please:
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဇရက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇရက်
Originally Posted by ဇရက်
ုဟုတ်တယ်ကိုဇရက် အဲဒီ software ရှိမှ ရတယ်။ ပြီးတော့ သူရဲ့ password ကို သိမှရတယ်။ သူစက်ကို ကြည့်ချင်ရင် သူလည်း ဖွင့်ထားမှရပါတယ်။
software ရှိဖို့လိုသလို ကိုယ်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လဲ
လက်ခံဖို့ လိုပါတယ်.. စကားဝှက်လဲ သိထားရပါမယ်
centurymg, crush, phoetharlay
ဉပမာဗျာ..sharing 4,5လုံးခွဲထားတဲ့ဟာဆိုရင်အဲဒီ 4,5စလုံးက admin တွေကိုလုပ်လို့ရလားခင်ဗျာ..မသိလို့မေးတာပါဗျာ..,,
အော် main admin control နိုင်မှတော့ share ထားတဲ့ဟာတွေကို လဲ
control နိုင်ပါတယ်...စက်တိုင်းမှာတော့ software ရှိရမယ်ထင်တယ်
password က တစ်ခါဖွင့်ရင်တစ်ခါပြောင်းနေတော့ တခြားမြို့ တစ်မြို့ က ကိုယ့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းစက်ကို ကြည့်ချင်ရင် တစ်ခါဖွင့်တိုင်း တစ်ခါတောင်းနေရမှာပေါ့။
ဒါကြောင့် password တစ်မျိုးထဲ အသေထားလို့ မရဘူးလားဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
အစ်ကိုရေ Password ကိုတစ်မျိုးတည်းထားပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ နေရာဒေသ ပြောင်းသွားလဲ အဲဒီ Password ကိုပဲ အသုံးပြုလို့ပါတယ်။ ပိုးကောင်လေးဆီမှာတော့ Password တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ အားလုံးအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ အစ်ကို လိုအပ်မယ်ဆိုရင် Software and Password ကို ပိုးကောင်လေးပို့ပေးပါမယ်။ Password ကလည်းတစ်မျိုးတည်းပါ။ ဘယ်နေရာမှာသုံးသုံးရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဲဒါက 2ယောက် password အတူတူပေးထားရင် ဖြစ်တက်တယ်..ကျွန်တ်ာဖြစ်ဖူးတာပြောတာနော်.. password change ကြည့်ပါ့လား.. ဟုတ်မဟုတ် not sure..
ကျွန်တော်ဆိုရင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းစက်တွေအားလုံးကို Password တစ်ခုဘဲပေးထားတယ်.. အားလုံးတစ်ခုထဲဆိုတော့.. ဘယ်တစ်ယောက်ရဲ့ စက်ကိုဘဲဖြစ် ဖြစ် သူ့ရဲ့ ID ပေးလာပြီဆိုရင် ကိုယ်က Passowrd တောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့
passowrd ပြန်ချိန်း( ပြန်ပေး) ချင်ရင်...
Password ကိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာကို ပေးလို့ရပါတယ်.. အပေါ်နဲ့အောက် Password က တူပါစေနော်.. ပြီးရင် ok ပြီပေါ့..
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ ကြယ်စင်မင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ဂတုံးလေး, မောင်ထက်, centurymg, nay nyo yi, thura.it
ပိုးကောင်လေးရေ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့ လိုချင်ပါတယ်ဗျာ။
ကိုသဝေထိုး, centurymg, nay nyo yi
Team Viewer အတွက် ကီးလေးတွေ ရှိရင် လုပ်ကျပါအုံးဗျာ တခုခုပေါ့။သူက အမြဲတန်းသုံးနေရင် ကီးက ကုန်ကုန်သွားလိုပါ။ ရှိတဲ့သူများရှိရင် ရှယ်ပေးကျပါအုံး။ တကယ်လို ကီးမလို ဘူးဆိုရင်လဲ ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြကျပါနော်
Find More Posts by လင်းထိန်
ကိုလင်းထိန် အဲဆော့ဝဲက ကီးမလိုဘူထင်ပါတယ်ဗျာ....ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲသုံးနေတာပဲ ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး ဗားရှင်းတွေကတော့ အသစ်ထွက်တော့ အကို အသစ်ထွက်တာလေးတွေကို တင်သုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ် Help >> About >> ဆိုတာကနေသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ License : Free ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ကိုလင်းထိန်......ကီးကတော့မလိုဘူးဗျ အကိုစက်မှာတစ်ခြား အယ်ရာတက်တာလားဆိုတာကို နည်းနည်းလောက်ပြန်စစ်ကြည့်ပါလား အကြံပေးကြည့်တာဗျာ....( မစားချင်တော့လို့လေ...ဟီးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဖိုးသားလေးကပျော်တတ်လိုစလိုက်တာနော်.....စိတ်ဆိုးရင်ရုပ်ဆိုးလိမ့်မယ် )
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ phoetharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလင်းထိန် က Full Version ကို install လုပ်ထားပြီး ကီး မထည့်လို့ထင်တယ်။ TeamViewer က တော်တော်များများ Portable ပဲ သုံးကြတာ များပါတယ်။ တကယ်လို့ install လုပ်ပြီး သုံးချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Full versions တွေကို install လုပ်စရာ မလိုပဲ Portable သုံးချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအောက်က link မှာ ကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်။ သွားယူလိုက်ပါ။
TeamViewer Portable, Crack and Patch Full versions !!
ကိုသဝေထိုး, ဂတုံးလေး, ဇော်ရဲပိုင်, phoetharlay, thura.it, tu tu
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 32 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အနော်ကတော့ စမ်းပြီးသွားပြီ usa ရယ် ပုသိမ်ရယ် .. တောင်ကြီးရယ်ကို ရှယ်ပဲဟေ့ ..
[SIZE="4"][CENTER][COLOR="Magenta"]ငယ်စဉ်က အော်တို စာအုပ်လေးထဲတွင် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရေးပေးခဲ့ဖူးတာ သတိရသည်။[/COLOR] [COLOR="Blue"][B]“လေထဲမှာ ငှက်ကလေးတွေ ပျံဝဲနေတာကို သဘောကျခဲ့ရင် ဘ၀မှာ လူတကာရဲ့ ထိပ်ကို ရောက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ”[/B][/COLOR] [COLOR="Magenta"]တဲ့ ... [/COLOR][/CENTER][/SIZE][CENTER]:teacher:[/CENTER]
Visit paingsoeoo's homepage!
Find More Posts by paingsoeoo
ကျတော် ရန်ကုန်က ကွန်နက်ရှင်နဲ့ စက်လှမ်းပြင်ပေးလို့ ရပါတယ် ကွန်နက်ရှင် အရမ်းမကောင်းရင်တော့ တော်တော်လေးကိုလေးပါတယ် ဒါပေ့မယ် အဆင်ပြေပါတယ် စိတ်ရှည်ရင်ပေါ့ လေ
မြန်မာ ကွန်နက်ရှင်ဆိုတော့ နဲ့နဲ့တော့ လေးတယ် ဒါတောင် မြန်မာကည ၁ နာရီလောက်မှ ချိတ်ပီး ပြင်ကြည့်တာနေ်ာ
ကွန်ပျုတာကို ၀င်ကြည့်ရုံမကပါဘူး ပြင်ပေးလို့ ရပါတယ် ချွင်းချက်တော့ ရှိတယ် ဘာလည်းဆိုတော့ restart ချမယ့် အရာတွေ ရယ်
Window တင်ပေးလို့မရတာကိုတော့ချွင်းချက်လေး ဖြည့်ပြောပါရစေ အကို အမတို့ရေ မှားတာ ရှိရင်ခွင့်လွတ်ပါ
Teamviewer နဲ့ အဝေးက ကွန်ပျူတာကို လှမ်းကိုင်မယ်
Teamviewer ကိုဒေါင်းပြီးရင် အဝေးကကွန်ပျူတာထဲကို ၀င်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
တစ်နေရာနဲ့တစ်နေရာ အလှမ်းကွာဝေးတဲ့နေရာ မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကို
ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေလှမ်းပြီး အကူအညီပေးလို့ရသလို .. သင်တန်းသဘောမျိုးလဲ
. Teamviewer မှာ .. ကွန်ပျူတာ Restart တစ်ခါချရင် ID နဲ့ Password
install လုပ်ပြီးတာနဲ့ သူက account မလုပ်ထားလဲ သုံးလို့ရပါတယ် ..
wait for session ရဲ့အောက်မှာ ID နဲ့ Password ရှိပါတယ် ..
ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို ပေးသုံးစေချင်ရင် အဆိုပါ နှစ်မျိုးစလုံးပေးလိုက်ပါ .
သူဝင်လာလို့ရပါပြီ .. ဒါပေမယ့် သူ့မှာလဲ team viewer ရှိဖို့လိုပါတယ် ..
create session အောက်က ID အကွက်မှာ ကိုဝင်ချင်တဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ ID ကို ရိုက်ထည့်လိုက်
remote support မှာ အမှန်ခြစ်ပေး
connect to partner ကိုနှိပ်လိုက်ပါ .
ခဏစောင့်ပြီးရင် password ရိုက်ထည့်ဖို့ အကွက်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ် .
password ကိုရိုက်ထည့်ပေးပြီး enter ကိုနိပ်လိုက်ပါ။.. အဆင်ပြေပြေနဲ့ တစ်ဖက်ကွန်ပျူတာကို ၀င်လို့ရသွားပါပြီ ..
သူ့ဆီက ID ကိုတောင်း
ID ထည့် enter နိပ်
ပြီးရင် password ဆိုတာပေါ်လာရင် သူ့ဆီက
password ထည့် enter နိပ်ဒါပါပဲ။
မရခဲ့ ရင်http://www.teamviewer.com မှာသာသွားဒေါင်းပေတော့။
ကိုပေါ်ဦး ဝင်ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပေါ်ကပို့စ်အတိုင်း အတိအကျ တူတာကို အောက်ကလင့်မှာ ၃၀ ရက်နေ့က တင်ထားတာတွေ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါ ကိုပေါ်ဦးနဲ့ ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ သေချာမသိသေးပါဘူး။ အကယ်၍များ အဲ့လင့်ကနေ ကူးလာပြီး ခရက်ဒစ်မပေးထားဘူးလို့ တွေ့ရင်တော့ ဒါဟာ ကိုပေါ်ဥိးအတွက် နောက်ဆုံးဝမ်နင်ပါပဲ။ နောက်တခါဆို ဘန်းပါပြီ။
Last edited by Aung Aung; 01-11-2010 at 03:26 PM..
နှင်း, phoetharlay, pyay soe oo
ပြန်စာ - Teamviewer နဲ့ အဝေးက ကွန်ပျူတာကို လှမ်းကိ&#
သူလဲအတူတူပါပဲ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့စက် မှာလဲ အဲ့ဒီ ဆော့ဝဲလ်ရှိရမယ်
ကိုယ့်စက်မှာလဲရှိရမယ် ပြီးရင်ကြည့်ချင်တဲ့စက်ရဲ့ IP No. တောင်းပါတယ်
နံပါတ်လေးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့စက်မှာ ရှိတဲ့ program တွေပေါ်လာပါတယ်
ကိုယ်က သူများလုပ်နေတာတွေကို ထိန်းချုပ်ချင်ရင်တော့ Ctrl key ကိုနှိပ်ထားလိုက်တာနဲ့ သူဘာမှဆက်လုပ်လို့
ဆော့ဝဲလ်ရဲ့ နာမည်ကတော့ Real VnC ပါ
ကဲ Download ယူလိုက်ပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ နှင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချယ်ရီမင်း, သန့်ဇင်ဌေး, မောင်ပေါ်ဦး, Aung Aung, bonge, kyaukphyu, phoetharlay, pyay soe oo
ကျွန်တော့် စက်က အခက်ခဲတွေကို ဒီအောက်က လင့် လေးကို ဖတ်ပြီး team viewer နဲ့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားခင်ဗျား...
တကယ်လို့ ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော့်ကို ကူညီပေးကြပါလား....
ကျွန်တော် ပြသနာကို ဒီလင့် လေးမှာ ဖတ်ပေးပါ...
Thanks to google, fixed the above pblm by turn user control on and off ( reboot needed)
ချယ်ရီမင်း, minthumon, nyinyi mt
team viewer သုံးတာ print ထုတ်လို့မရလို့ပါ..
ဖူးလေးတို့ စက်နှစ်လုံးကို team viewer နဲ့ ချိတ်သုံးတာ အဆင်ပြေပါတယ်...ဒါပေမယ့် print ထုတ်လို့မရဖြစ်နေလို့ပါ...စက်တလုံးကနေပြီး တခြားတလုံးကဟာကိုထုတ်တာရပါတယ်..ဒါပေမယ့် Print ကြိုးကို ကိုယ်ထိုင်တဲ့စက်မှာဘဲတပ်ထားပြီး တခြးစက်ကဟာကို print ထုတ်ချင်တာပါ...ဘာလိုနေလဲမသိပါဘူး...network setting မျာ ဘာပြင်ရမလဲမသိပါဘူး...ကူညီကြပါဦးနော်...အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားလျက်
software guide, software howto, team viewer
Photoshop Brushes Viewer kothu Softwares များ230-07-2008 04:02 AM
Visual Studio Team System: 2007 aung myint E-books များ027-01-2008 12:29 PM